पहुँच डाटाबेस भ्रष्टाचारको सामान्य कारणहरू
घर उत्पादन DataNumen Access Repair पहुँच भ्रष्टाचारको सामान्य कारणहरू
सामान्य कारणहरूले एक Microsoft पहुँच डेटाबेसलाई दूषित वा बिग्रिएको बनाउँदछ
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन तपाईंको पहुँच MDB फाईल बिग्रेको वा बिगार्ने कारण गर्दछ। हामी तिनीहरूलाई दुई कोटिमा वर्गीकृत गर्दछौं, जस्तै हार्डवेयर कारण र सफ्टवेयर कारणहरू।
जब तपाईंको हार्डवेयर तपाईंको पहुँच डाटाबेसको डाटा भण्डारण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न असफल हुन्छ, डाटाबेसहरू भ्रष्ट हुने छन्। त्यहाँ मुख्यतया तीन प्रकारका हुन्छन्:
डाटा भण्डारण उपकरण विफलता। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको हार्ड डिस्क संग केहि खराब क्षेत्रहरु छन् र तपाइँको पहुँच MDB फाईल यी क्षेत्रहरु मा भण्डारण गरिएको छ। त्यसोभए तपाईं MDB फाईलको अंश मात्र पढ्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले पढ्नुभएको डाटा गलत र त्रुटिका पूर्ण छन्।
दोषपूर्ण नेटवर्किंग उपकरण। उदाहरण को लागी, पहुँच डाटाबेस सर्वर मा बस्छ, र तपाईं यो एक ग्राहक कम्प्यूटर बाट नेटवर्क लिंक मार्फत पहुँच गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्। यदि नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, cabकम, राउटरहरू, हबहरू र नेटवर्क लिंकहरू बनाउने कुनै पनि अन्य उपकरणहरूमा समस्याहरू छन्, तब MDB डाटाबेसको रिमोट पहुँचले यसलाई बिग्रन सक्छ।
शक्ति विफलता। यदि तपाईं एक MDB डाटाबेस पहुँच गर्दै हुनुहुन्छ जब एक बिजली असफलता भयो भने, यसले तपाईंको MDB फाईलहरू बिगार्न सक्छ।
हार्डवेयर समस्याका कारण पहुँच डेटाबेस भ्रष्टाचारलाई रोक्न वा घटाउन धेरै तरिकाहरू छन्, उदाहरणका लागि, यूपीएसले विफलता समस्यालाई न्यून गर्न सक्छ, र भरपर्दो हार्डवेयर उपकरणहरूको प्रयोगले डाटा भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई पनि कम गर्न सक्छ।
सफ्टवेयर सम्बन्धी मुद्दाहरूको कारणले धेरै पहुँच डाटाबेस भ्रष्टहरू पनि देखा पर्दछन्।
गलत फाइल सिस्टम रिकभरी। तपाईलाई अविश्वासनीय लाग्न सक्छ कि फाइल प्रणाली रिकभरीले पहुँच डाटाबेस बिग्रेको कारण गराउन सक्छ। तर वास्तवमा कहिलेकाँही जब तपाइँको फाईल प्रणाली बिग्रिन्छ, र तपाइँले यसमा एमडीबी फाईलहरू पुनःप्राप्ति गर्न डेटा रिकभरी उपकरण वा विशेषज्ञ भाँडा लिन खोज्नुहुन्छ, फाइलहरू अझै भ्रष्ट हुन सक्छन्, किनकि:
फाईल प्रणाली प्रकोपको कारण, मूल MDB डाटाबेस फाइलका केहि भागहरू l हुन्ost स्थायी रूपमा, वा कचरा डाटा द्वारा अधिलेखन, जसले अन्तिम बचाएको MDB फाईल अधूरो बनाउँदछ वा गलत डाटा समावेश गर्दछ।
रिकभरी उपकरण वा विशेषज्ञसँग पर्याप्त विशेषज्ञता छैन कि यसले / उसले केही फोहोर डेटा स collected्कलन गर्‍यो र तिनीहरूलाई एमएमबी विस्तारका साथ फाईलको रूपमा बचत गर्‍यो। यी तथाकथित .MDB फाईलहरूले पहुँच डाटाबेसको कुनै मान्य डेटा समावेश गर्दैन, तिनीहरू पूर्ण रूपमा बेकार हुन्।
रिकभरी उपकरण वा विशेषज्ञले MDB फाईलका लागि सहि डाटा ब्लकहरू स collected्कलन गरेको छ, तर तिनीहरूलाई सही क्रममा मिलाएको छैन, जसले अन्तिम उद्धार गरिएको MDB फाइललाई काम नलाग्ने बनाउँदछ।
त्यसकारण, जब फाईल प्रणाली प्रकोप हुन्छ, तपाईले एक राम्रो डेटा रिकभरी उपकरण / विशेषज्ञ खोज्नु पर्छ तपाईको MDB डाटाबेस फाइलहरू पुनःप्राप्ति गर्नका लागि। खराब उपकरण / विशेषज्ञले अझ राम्रो अवस्थाको सट्टामा अवस्था अझ खराब बनाउँछ।
भाइरस वा अन्य खराब सफ्टवेयर। धेरै भाइरसहरू, जस्तै Trojan.Win32.Cryzip.a, संक्रमित हुनेछ र पहुँच MDB फाईलहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ वा तिनीहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउँदैन। तपाईको डेटाबेस प्रणालीको लागि गुणवत्ता एन्टि भाइरस सफ्टवेयर स्थापना गर्न अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ।
अपरेशन रद्द लेख्नुहोस्। सामान्य अवस्थामा, तपाईले MDB डाटाबेसमा सबै परिवर्तनहरू बचत गरेर 'एक्सेस' वा "क्लोज" मेनू आईटममा क्लिक गरेर पहुँच छोड्नु पर्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं MDB डाटाबेस खोल्दै र लेख्दै हुनुहुन्छ जब पहुँच असामान्य रूपमा बन्द गरिएको छ, तब जेट डाटाबेस ईन्जिनले डाटाबेसलाई शंकास्पद वा बिग्रेको रूपमा चिन्हित गर्न सक्दछ। यो हुन सक्दछ यदि माथि उल्लेखित पावर असफलता देखा पर्‍यो, वा यदि तपाइँ विन्डोज टास्क प्रबन्धकमा "अन्त कार्य" क्लिक गरेर पहुँच छोड्नुभयो, वा यदि तपाइँले सामान्य रूपमा पहुँच र विन्डोज छोडे बिना कम्प्युटर बन्द गर्नुभयो भने।
भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस को लक्षण:
तपाईंको सन्दर्भको लागि, हामीले स .्कलन गरेका छौं बिग्रेको MDB फाईल पहुँच गर्दा त्रुटिहरूको सूची.
भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस फिक्स गर्नुहोस्:
तपाईं हाम्रो पुरस्कार विजेता उत्पादन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Access Repair लाई तपाईंको भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्.
भ्रष्ट माइक्रोसफ्ट एक्सेस MDBs FAQ